I-Outbrain: kuyini | Izindaba ze-ECommerce
Kungenzeka awukaze uzwe nge-Outbrain ngaphambilini, noma wazi ukuthi iyini. Nokho, ingenye yamapulatifomu aphumelelayo emhlabeni wonke, ikakhulukazi ngoba sikhuluma ngethuluzi lokuncoma okuqukethwe nokuthola ukuchofoza namazwana.
Kodwa, Iyini i-Outbrain? Kwenzelweni? Kungaba uhlobo lwesu lokuqukethwe ukuze uthole abafundi abaningi. Sikuchazela konke.
1 Yini i-Outbrain
2 Kungani kufanele usebenzise i-Outbrain
3 Ungayisebenzisa kanjani i-Outbrain
4 Ungaphumelela kanjani emsamo
I-Outbrain izichaza ngokuthi a inkundla yokuncoma lapho unezibalo ongathola khona imiphumela mayelana nokuchofoza kanye nenani lezincomo abakunike khona ngalokho okuqukethwe owabelane ngakho.
Ngamanye amazwi, sikhuluma ngethuluzi ongancoma ngalo okuqukethwe kwakho futhi likuvumele ukuthi ukhulise inombolo yabasebenzisi abeza ekhasini lakho bakhiqize inzuzo enkulu nakakhulu (uzoba nethrafikhi eningi kanye nezithameli eziningi ongaziqondisa).
Okwamanje isebenza nemidiya yokuhlela ebaluleke kakhulu emhlabeni wonke njengezindaba zeSky, CNN, Fox News, Hears ... Futhi, nakuba ingakavulwa eSpain, iqiniso liwukuthi lokhu akusho ukuthi ngeke isetshenziselwe ukuthola ithrafikhi eyengeziwe.
Kungani kufanele usebenzise i-Outbrain
Kunabantu abaningi abangase babe manqikanqika ukusebenzisa lolu hlobo lwethuluzi ngoba akwaziwa ngempela ukuthi lingalimaza noma lizuze kangakanani i-SEO kanye nokumiswa kwekhasi.
Ngokusho a Isifundo se-Moz, inkundla ye-Outbrain Yiyo ekhiqiza inombolo enkulu yokubukwa kwekhasi ngomsebenzisi ngamunye, kanye nezinga eliphansi lokugxuma. Okusho ukuthi, ungafinyelela imiphumela engcono kunamanye amakhasi.
Esinye sezici egqama ngazo ingoba bakhathalela kakhulu ukunikeza okuqukethwe kwekhwalithi nenani, inqobo nje uma kufundisa noma kujabulisa. Uma lezi zinhlobo zama-athikili zithunyelwa, cishe ziyamukelwa njalo, futhi hhayi lokho kuphela, kodwa zingaphinda zikhiqize ukuzibandakanya okwengeziwe okungama-40% kunokuphromotha okuvamile noma izikhangiso, okufaka phakathi isikhathi eside seseshini (esifika ngokuphindwe kathathu).
Kulokhu kufanele ujoyine ingxenye yezethameli. Futhi ukuthi lapho okushicilelwe kuthunyelwa, akufinyeleli "noma yiliphi iqembu labantu", kodwa kuphela futhi kuphela kulabo abangase bathande ngempela. Ukuze benze lokhu, baqapha abasebenzisi futhi bafunde uhlobo lokuqukethwe abavame ukukubuyekeza ezinyangeni ezisanda kwedlula ukuze babanikeze lolo hlobo lokuqukethwe. Futhi kungenxa yokuthi bane-algorithm eneziguquko ezingu-30 ukuze bakwazi ukunikeza abasebenzisi okuqukethwe okungcono kakhulu futhi, ngesikhathi esifanayo, banikeza izinkampani ithuluzi elisebenzayo njengoba lifinyelela izethameli eziqondiswe kubo.
Okokugcina, enye inzuzo amanye amapulatifomu angenayo ikhono lokubonisa izibalo, kodwa futhi ukushintshanisa izincomo phakathi kwamabhulogi.
Ungayisebenzisa kanjani i-Outbrain
Ukuqala ukusebenzisa i-Outbrain into yokuqala okufanele uyenze Udinga ukufaka iwebhusayithi yabo futhi ubhalise i-akhawunti lapho ukuze uyisebenzise. Khumbula ukuthi i-Outbrain inezinketho ezimbalwa, kodwa inenguqulo yamahhala nezinye izinguqulo ezikhokhelwayo. Uma usebenzisa emahhala ungahlola ukuthi yikho yini obukufuna.
Uma usuxhumekile, ungabhalisa ibhulogi yakho noma ikhasi. Ukuze wenze lokhu, kufanele uye kunketho ethi "Engeza ibhulogi". Lapha kuzodingeka unqume ukuthi ngabe uyifakile yini iwijethi yesikhulumi, khetha inkundla yakho (okungukuthi, lapho isingathwa khona noma nokuthi iyiphi i-CMS onayo ibhulogi yakho), i-url, ulimi, kanye nohlobo lwesincomo (okungcono kakhulu ifana nesithonjana, njengoba ibukeka kakhulu). Kubalulekile ukuthi ufake lesi sinqunjwana kubhulogi noma ikhasi lakho ukuze sisebenze kahle noma, uma kungenjalo, sizonikeza iphutha.
Uma usuwenze konke, futhi wamukela imigomo nemibandela yesevisi, kuzodingeka uchofoze inkinobho yokuqhubeka.
Ngemva kwalesi sinyathelo, okusele okumele ukwenze ukuya esigabeni sokuklama sekhasi lakho, futhi uhlole ukuthi iwijethi iyasebenza yini. Lokhu kuzovumela inkundla ukuthi ihlale ithola okuqukethwe okusha futhi ikwazi ukukubonisa. Kodwa qaphela Ngoba ngesikhathi esifanayo lapho umvumela ukuthi abelane ngokuqukethwe kwakho, uzophinde ube isitsha lapho uzothola khona okuqukethwe kwabanye.
Lokhu kungashintshwa, ngokufaka i-Outbrain, engxenyeni ethi Lawula amabhulogi / isilungiselelo, ungayilungisa ukuze ixhumanise isayithi lakho nezinye ezihlobene, ukuze ixhumanise isayithi lakho kuphela noma ukuze ingabonisi izincomo. Noma ngabe yini oyinqumayo, kufanele uchofoze okuthi Gcina izilungiselelo ukuze irekhodwe.
Ungaphumelela kanjani emsamo
Uma unquma ukuyizama, uma ufuna ngempela ukuphumelela ngayo, kubalulekile ukuthi wazi ukuheha izethameli ozifunayo futhi zikulandele. Lokhu, okubonakala kulula, empeleni akunjalo. Ngakho-ke, phakathi kwezincomo esingakunikeza zona, yilezi:
Zibekele imigomo. Ezinye ezingokoqobo ukuze umkhankaso wakho ube nempumelelo oyifunayo. Ngokusekelwe kulezo zinhloso ukuthi kufanele ukhethe okuqukethwe. Isibonelo, uma ufuna ukwabelana ngesihloko ngabantu abadala futhi izethameli zakho ezihlosiwe ngabantu abasha, ngeke kube nengqondo.
Nquma ukuthi obani izithameli zakho. Lokhu kubalulekile ukuchaza ngokucabangela jikelele. Okusho ukuthi, ekhasini lakho lonke, obani izithameli eziqondiwe? Futhi ngokusekelwe kulokho okuqukethwe ukwabelana, kungaba ubani? Ngale ndlela uzokwazi ukuhlukanisa kangcono ububanzi bendawo, uhlobo lwedivayisi, iminyaka, njll.
Khetha okuqukethwe kwakho. Ukukhumbula konke lokhu okungenhla. Uma ukhetha okungalungile, umkhankaso wakho ngeke usize. Esinye izincomo esizenzayo ukuthi ungashiyi umbhalo owubeke kalula, noma isithombe. Zombili lezi zakhi yizo ezingaheha abafundi ngakho-ke kuyatuseka ukuthi uthathe isikhathi sakho ukhethe ezingcono kakhulu.
Landelela. Kubaluleke kakhulu ukunaka imininingwane ngaphambi kokuqala umkhankaso wakho njengoba kwenzeka kamuva, ukuhlola ukuthi ubuqinisile yini, uma ubunephutha, njll. bese ukwazi ukulungisa yonke into.
Ithuluzi ngokwalo lithatha isikhathi esincane ukuze lithole imiphumela, ngakho-ke akufanele nje uhlole futhi vele. Kungcono ukuzama ukuyinika indawo emaphakathi ukuze ubone inqubekelaphambili futhi uma kuyithuluzi obulifuna ngempela.
Ingabe bewazi i-Outbrain ngaphambili? Ucabangani ngaye? Uzoyisebenzisa?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-ECommerce » Marketing » Ukuthengisa oku-intanethi » Outbrain: kuyini
Ukuqamba kabusha: izibonelo
Uyenza kanjani imali kuTikTok